यङ्गुन अर्थात दुःखबाट मुक्ति
घिमिरे युवराज शनिवार, बैशाख २, २०७४ 8479 पटक पढिएको
बर्मेलीको सहनशीलता असिमित छ । ट्रकभरी स्पिकर चाङ लाएर राखिएको छ । प्रायः सबै स्पिकर बजेका छन् । बजिरहेका स्पिकरमाथि केही युवा आनन्दले बसेका छन् । सडकमा यस्ता ट्र्क अचेल धेरै देखिन्छन् । यी ट्रक देख्दा पुराण र बिहेमा दिनरात गाउँ शहर थर्काएर गीत बजाएर सुत्न नदिनेहरूको आलोचना गर्ने नेपाली ट्विटेहरूलाई सम्झिएँ ।
उनीहरूलाई पनि यिनै स्पिकरमाथि राख्नु पर्ने । ट्रक हुईँकिएको छ । उनीहरू प्रफुल्ल छन् किनभने यहाँ पानी महोत्सवको तयारी सुरु भएको छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो चाड ‘पानी महोत्सव'मा सरकारले १० दिन विदा दिने रहेछ । पानी महोत्सवको बर्मेली नाम संक्रान्त हो । हरेक वर्षको संक्रान्तीमा यो महोत्सव मनाइन्छ । यसको तिथि लुनार पात्रो अनुसार हेरिन्छ ।
वर्षको अन्तिम दिनदेखि पानी खेल्न सुरु गरेर नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने यो पर्व यहाँका बौद्ध तथा हिन्दुहरूको ठूलो पर्व रहेछ । अहिले यसलाई राष्ट्रिय चाडकै रुपमा मनाइन्छ । त्यसैका लागि याङ्गुन र माण्डलेय जस्ता ठूला सहरभरी सरकारी तामझाम सुरु भएको छ । काठैकाठले बनाइएका छन् भव्य मञ्चहरू जहाँबाट मानिसहरूलाई पानी छ्यापिन्छ । गीत गाएर रमाइलो गरिन्छ । गर्मी चरम हुँदै जाँदा पानी छ्याप्ने पर्व पनि एक किसिमले प्रकृतिसँगको तालमेल जस्तो लाग्छ । पानी महोत्सवकै चर्चा छ यहाँ । सार्वजनिक यातायात चल्ने छैनन् । हप्ता दिनलाई खानेकुरा किनेर राख्नु पर्नेछ । मानिसहरूमाझ र संचारमाध्यममा पनि यसकै चर्चा छ । र, अर्को चर्चा बर्माका राष्ट्रपति ‘ऊ थिन च्यो'को छ ।
पानी महोत्सवको पुर्बसन्ध्यामा चिन भ्रमणमा रहेका च्योप्रति मिडिया र आम नागरिकको उत्सुकता छ, के उनले चिनियाँ राष्ट्र्पतिसँग ‘मित्सुङ बाँध' (मेखा र मलिखा नदीको दोभान) बारे कुरा गर्नेछन् ? ठूला देशको सिमानामा रहेका सबै सानादेशको हविगत सायद यस्तै हुन्छ । सन् २००९ मा दुई देशबीचको संयुक्त लगानीमा सुरु भएको ‘मित्सुङ विद्युत परियोजना'बाट उत्पादन हुने ९० प्रतिशत विद्युत चिनले लाने रहेछ । एयावडी नदीमा बन्दै गरेको यो परियोजना संसारकै १५औँ ठूलो विद्युत उत्पादन केन्द्र हुने रहेछ । बर्माको सबैभन्दा ठूलो यस नदीको बाँधले धेरै आवास क्षेत्र र जमिन डुबाउने रहेछ । बर्माका आम नागरिकले गरेको विरोधका कारण सन् २०११ मा स्थगित यो परियोजना अब के हुने हो भन्ने सबैलाई उत्सुकता छ । भनिन्छ, ‘ऐरावत हात्ती'को नामबाट नामाकरण गरिएको नदी ऐरावती नदी अपभ्रंस भएर एयावडी भएको रहेछ । बर्माका जंगलमा अझै संसारका सबैभन्दा ठूला हात्ती पाईन्छन् । यहाँका गाउँमा पनि हाम्रो झापा जिल्लामा जस्तो हात्ती आतंक बेलाबेला चल्ने गर्छ ।
मैले उमा सुवेदीको ‘ईति' उपन्यास सम्झिएँ । हामी टनकपुर बाँध र महाकाली नदीलाई उसरी नै सम्झन्छौँ । के हामीसँग भारतसँग बहस गर्ने र हाम्रा नदीमा उनीहरूको हस्तक्षेप हटाउने हिम्मत छ ? राष्ट्र्पति च्यो र सबै बर्माबासीलाई पानी महोत्सवको शुभकामना । पानी महोत्सव मनाउने नागरिकहरू नै पानीका कारणले ठगिनु नपरोस् । ५ वटादेशसँग सिमाना जोडिएको नेपाल भन्दा ४ गुणा ठूलो यो देश उसरी नै चिन र भारतको चेपुवामा छ । तर हामी भन्दा निक्कै सुध्रिएको अर्थ ब्यवस्था भएको यो देशमा म लगभग गुप्ताबास जस्तो दिनहरू बिताइरहेको छु । लाटकोसेरो जस्तो पो हो कि । दिनभरी घरभित्रै, साँझ परेपछि बाहिर निस्कने । प्रिय मित्रहरू यो बर्माको यङ्गुन सहर हो । आज दिउँसो यहाँको तापक्रम ३७ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । र, यो बढ्नेक्रममा छ ।
बर्माको पहिचान भनेको यहाँको लुंगी र पान हो । जर्दा पान सबैको मुखमा हुन्छ । अचेल पर्यटकहरूको बृद्धिसँगै डाउनटाउनमा डिस्को र बारहरूको संख्या पनि थपिँदैछन् । अझै डेटिङ र डिस्को पनि लुंगी मै आउने युवाहरू छन् यहाँ ।
कोपनहेगनको लिटिल मर्मेट, ब्रसेल्सको पिसाब फेरिरहेको फुच्चे केटो वा लुभ्रको मोनालिसा जस्तो ट्वा पार्ने खालको छैन बर्माको स्वेडागन पेगोडा । हुन त भनिएला, महत्वपूर्ण हुनलाई आकारले ठूलो र विशेष खालकै भैरहनु पर्दैन । तर यसको भब्यता, सुन्दरता र सालिनताले स्वेडागन पुग्नेहरू साँच्चै मन्त्रमुग्ध हुन्छन् ।
पेरिसको आइफल टावर, आग्राको ताजमहल, लखनौको भुलभुलैया, काठमाडौको स्वयंभू र पशुपतिनाथ जस्तै पर्यटकिय आकर्षण भएको सुन्दर ऐतिहासिक आस्था बोकेको स्वेडागन समस्त बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको मात्रै धरोहर हैन । यहाँ आउने सबै पर्यटकहरूको प्रेम र सद्भावको केन्द्र बनेको छ । दिल्लीको जैन मन्दिर (लोटस टेम्पल)मा जस्तो यहाँ कसैले नबोल्नुस् भन्दैनन् । यो न्यूयोर्कको ९० मिनेटसम्म नबोली खाना खाने रेस्टुरेन्ट ‘यिट इन ग्रिनप्वाइन्ट' पनि हैन ।
न त काठमाडौका नाटकघरहरूमा जस्तो कसैले मोवाइल अफ गर्नुस्, खानेकुरा नखानुस् नै भन्छ । तर बहुसंख्यक मानिसहरू यहाँ प्रवेश गर्नासाथ मौन हुन्छन् । सालिन हुन्छन् । धार्मिक आस्थाको कुरा पनि छ तर यहाँको बास्तुकलाले मानिसहरूलाई प्रभावित गर्छ । अहा अति सुन्दर । कति सफा । नेपालमा मल्ल र लिच्छवीकालमा बनेका ऐतिहासिक स्थलहरूको बास्तुकलामा त्यो भव्यता हामी भेट्छौँ ।
त्यही भएर हामीले बसाउन लागेको सहर, चोक, बाटोघाटो, चौर, फूलबारी, हामीले बनाउन लागेको कार्यालय, घर, विद्यालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, नाटकघर, सिनेमाघरमा त्यो बास्तुकला देखिनु पथ्र्यो जहाँ हाम्रो हृदय बस्न सकोस् । ठाउँ विशेषको वास्तुकलाले हामीलाई त्यही संस्कारमा हुर्काउने हो । यतिखेर हामी कस्तो संस्कार निर्माण गर्दैछौँ ? जिम्मेवारी लिनेहरूले सोच्नुपर्छ ।
पहेँलो रंगका पनि कति किसिम हुन्छन् ? स्वेडागोन पेगोडालाई विहानदेखि बेलुकासम्म हेरे हुन्छ । घामको मात्रासँगै, रंगसँगै पहेँलो स्वेडागोनको पनि रंग बदलिरहेको हुन्छ । ‘शिल्पी' नाटकघर छेऊका रुखहरूले पनि यसरी नै रंग फेर्छन् । त्यही पात कोमल हरियो हुन्छ, त्यही पात गाडा हरियो हुन्छ । आकाशमा कालो बादल मडारिँदा पात पनि कालै देखिन्छ । कस्तो रमाईलो । मलाई त यस्तो देख्दा खुब रमाइलो लाग्छ । फुर्किन्छु प्राय म । आखिर रंगको अस्तित्व अँध्यारोले न दिने हो । जहाँ उज्यालेको मात्रा र स्रोतले रंगको बास्तविक स्वरुप भन्छ । त्यसो भए रंग भनेको उज्यालोको अस्तित्व रहेछ । याद गर्नुभएको छ होला, टन्टलापुर घाम लागिरहेको बेलामा एक सिरक बादल जब सूर्य नारायणको रापिलो अनुहार पुच्दै बहन्छ त्यतिखेर स्वेडागन पेगोडाको रंग कसरी बदलिन्छ थाहा लाग्छ । स्वेडागनमा अर्कै कोमल पँहेलो रंग खुल्छ । यही हाम्रो वरिपरिका बनस्पतीहरूमा पनि लागु हुन्छ । यो आ-आफ्नो चासोको विषय हो । मलाई यसमा निक्कै चासो छ ।
पानी परेपछि बस्तुको रंगमा झनै परिवर्तन आउँछ । बाटोमा बासना आउँछ । धर्तीमा मादकता छाउँछ । किशोरकिशोरीमा पहिलो प्रेम बसे जस्तो । साँझ खासमा स्वेडागन खास्साको देखिन्छ वा देखिन्छे । पहिलो र छोटो चुम्बनपछि आँखा जुधाउन नसकेका युवायुवती जस्तो स्वेडागन कोमल र उदात्त हुन्छे हरेक साँझ । यहाँ हरेक साँझ घाम यङ्गुन नदी वा ऐरावत नदीमा डुब्छ । कसैको घाम समन्द्रमा खस्दो हो । कसैको मरुभूमिमा । मेरो मोरङको गाउँमा घाम बाँसघारीमा लुक्छ । काठमाडौमा त अचेल घाम घरपछाडि लुक्छ । यहाँ घाम नदीमा डुबे पनि घामको उज्यालो बाँकी नै छ । क्षितिज अझै रातै छ । परिसरमा पे्रमिल जोडीहरू पनि छन् म र लुना जस्तै । टलक्क टल्किने ढुंगा छापिएको भुईँमा बसौँ बसौँ लाग्छ । त्यहीँ सुतौँ जस्तो पनि लाग्छ । पुलकित छु तर सम्हालिन कर लाग्छ । त्यहाँ विशेष अनुशासन परिवेशले माग्छ । अनेकौँ रंग बोकेर अनेकौँ रंगका मानिसहरू आएका छन् । अनेकौँ उमेरका । उनीहरूको खुशी देखेर म खुशी हुन्छु । खासमा ती खुशीहरू सम्बन्धित छन् जस्तो देखिन्छ ।
नत्र सिरियामा बमबाट मारिएका कलिला बालकहरू समाचारमा देख्दा हामी किन रुन्छौँ ? लुना र म पनि खुशी भएका मानिसहरूको बीचमा खुशी छौँ । दुःख पनि त क्षणिक हो । संसारकै ठूलो र पुरानो बौद्ध चैत्यमा आएपछि अलिकति दार्शनिक त हुनै पर्‍यो । साँझपख यङ्गुन नदीमा नाउमा बसेर यात्रा गर्दा खुब मज्जा आउँछ । ‘सिगल'हरू चारो टिप्न आउँछन् । यात्रुहरू चारोलाई हावामा फाल्छन् । चराहरू हावाबाटै चारो टिप्छन् । हरेक यात्रु नाउको आकाशमा सयौँ सिगलहरू उडेको रोमाञ्चक दृश्यमा पश्चिम क्षितिज रातो भएर रंग भर्छ ।
ठूलो नदी दुर्गन्धित छ । ठूलो सहरको मुटु भएर बग्ने धेरै नदीहरूको दुःखको कारण हामीले उब्जाएको मल र ढल हो । रातको समयमा स्वेडागन झलल्ल बल्छ । जुनेली रातमा निलो आकाशले नयाँ रंग भर्छ । एकैखाले भेषभुषा बनाएका कुचो लगाउने दर्जनौँ महिलाहरू कोरस नृत्य झैँ वा दाईँका गोरु झैँ लाइनमा उभिएर परिसरमा कुचो लाउँछन् । कुची महिलाहरूको लाइन एक पछि अर्को हुन्छन् । पर्यटकहरूले फोटो लिन लाग्दा कोसर टक्क रोकिन्छ । बौद्ध भक्तालुहरू र पर्यटकहरूको भिंड लाग्ने यो पेगोडा म्यानमारको सबैभन्दा पवित्र र आध्यात्मिक स्थल मानिन्छ । पर्यटकहरूको लागि सबैभन्दा आकर्षक यस ठाउँमा मानौ नपुगे यो शहर घुमेको कुनै अर्थ लाग्दैन । ईतिहास खोतल्दै जाँदा अर्को रहस्य फेला पर्छ । यो पेगोडा त गौतमबुद्धकै उमेरको रहेछ।
स्वेडागनको उचाई ११० मिटर छ । धेरै पटकको जिर्णोद्वारमा यसको उचाई थपिएको हो । संसारकोसबैभन्दा पुरानो यो चैत्य वरिपरि यङ्गुनको सबैभन्दा पुरानो बस्ती थियो भनिन्छ । सन् १७५५ मा राजा अलौङ्पायाले बर्माको केन्द्रलाई हस्तक्षेप गरे र शहर बसाए । उनैले शहरको नाम राखे यङ्गुन । बर्मेली भाषामा यसको अर्थ हुन्छ ‘दुःखबाट मुक्ति' । सन् १८२४ को पहिलो आङ्लो बर्मेली युद्धमा ब्रिटिसहरूले जितेपछि यङ्गुनको नाम फेरिएर रङ्गुन भयो । र, यसका दुःखका दिन सुरु भए । त्यसपछि सन् १८५२ र सन् १८८५ गरेर जम्मा ३ पटकसम्म ब्रिटिसहरूसँग बर्मेलीहरूको युद्ध भयो । तीनै पटक बर्माले हार्‍यो । यही बखत सन् १८३५मा बेलायती गोर्खालीको रुपमा पहिलो पटक गोर्खाली सैनिक टुकुटी बर्मा आइपुगेको मानिन्छ । ००० बाल्यकालदेखि नै सुनेको नाम हो बर्मा । धेरै पटक सुनेको उखान हो ‘बर्मा गए कर्मसँगै' । बर्माबाट आएका मानिसहरू थिए गाउँमा फाट्टफुट्ट । ती मानिसहरूलाई देखेर त्यतिखेर बर्माबारे मभित्र एउटै धारणा गढेर बसेको थियो । लाग्थ्यो बर्मा गरिव र दुःखीहरूको ठाउँ हो ।
नजरबन्दमा परेकी नेता आङ सान सुकीको नाम रेडियोले पटकपटक लिन्थ्यो । हाम्रो घरको इण्डियन रेडियो कस्तो भने विहान ६ वजेदेखि राती ११ बजेसम्म बन्द नहुने । नेपालका लागि भारतीय राजदुतहरू जस्तो । दिउँसो ११ बजेदेखि १ बजेसम्म प्रसारण रोकिएको बेला पनि रेडियो स्याँ...गरिरहेको हुन्थ्यो । प्रसारणको अन्त्यमा बज्ने राष्ट्रगान र सुरु हुनु भन्दा अगाडिको टुँउउउ...आवाज अझै मेरो कानमा गुञ्जिन्छ । तब अंग्रेजी समाचार कसैले नबुझे पनि रेडियोले फलाकी रहन्थ्यो । अंग्रेजी समाचारमा मैले धेरै पटक सुनेको नाम हो - आङ सान सुकी ।
मेरो लागि यो अचम्मको नाम भएर कति पटक आन साङ सुची पनि भयो । दुई वटा फिल्म ‘दि लेडी' र 'बर्मा भिजे'ले मलाई धेरै हदसम्म बर्माको राजनीति र आङ सान सुकीबारे बुझ्न मद्दत गरे । आङ सान सुकीको अन्तर्वार्ता र उनको जीवनी समेटिएको किताब ‘दि भ्वोइस अफ होप'ले पनि धेरै सिकायो मलाई । सुकीका पिता आङ सान बर्माका स्वतन्त्रता सेनानी हुन् । ब्रिटिस शासन बिरुद्ध आन्दोलनको योजना बनाउँदै गर्दा सन् १९४७ मा सैनिकहरूले सुकीका पिताको हत्या गर्छन् । त्यतिखेर सुकी २ वर्षकी थिइन् । सन् १९४८ मा भारत स्वतन्त्रतासँगै बर्मा पनि ब्रिटिस शासनबाट मुक्त हुन्छ । तर फेरि सन् १९६२ मा शैनिक सासन सुरु हुन्छ । बेलायतमै विवाह गरेर बसेकी सुकी सन् १९८८ मा आफ््नी विरामी आमालाई भेट्न यंगुन आउँदा शैनिक सासन बिरुद्धको उत्सर्गको आन्दोलन देख्छिन् । तत्कालीन सैनिकद्धारा हजारौँ मानिसहरू मारिन्छन् । आम बर्मेली नागरिकहरूको अनुरोधमा उनले बर्माको आन्दोलनमा चासो राख्छिन् । र, अन्तत ‘नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी' पार्टी स्थापनासँगै उक्त पार्टीको महासचिव नियुक्त हुन्छिन् । सुकीको पार्टीले सन् १९९० मा बहुमतले चुनाव जित्छ । तर, सैनिक सासनले त्यसलाई बैधानिकता दिँदैन । धेरै मानिसहरू जेलमा पर्छन् ।
उनी लामो समय नजरबन्दमा राखिन्छिन् । ‘दि लेडी फिल्म'ले सन् २०११ सम्मको सुकीको जीवनी र बर्मेली स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई छोटकरीमा भन्छ । सन् २००७ मा लाखौँ बौद्ध भिक्षुहरूले गरेको शान्तीपूर्ण आन्दोलनलाई रोचक ढंगले खिचेको छ बर्मा भिजे डकुमेन्ट्रीले । भिक्षुहरूले पनि आन्दोलनमा हतियार उठाए भन्ने हल्ला हामीले नेपालसम्म सुनेका थियौँ । तर उक्त डकुमेन्ट्री र अन्य विवरणहरूले भिक्षुहरूले हतियार चलाएको भन्ने हल्लालाई गलत सावित गरेको छ । सात जना युवाहरूले गोप्य रुपमा खिचेको भिडियोहरूबाट बनेको यस डकुमेन्ट्रीका निर्देशक हुन् - आण्डर्स ओस्टरगार्ड । राजनीतिमा चासो हुनेहरूले हेर्नै पर्ने डकुमेन्ट्री हो यो । सन् १९३४मा प्रकाशित जर्ज अर्वेलको पहिलो उपन्यास ‘बर्मिज् डेज'ले पनि ब्रिटिस सासनबाट आम मानिसहरूले भोगेको पीडा देखाएको छ । अर्वेल सन् १९२२ देखि १९२७ सम्म आफैँ ब्रिटिस भारतीय पुलिसका रुपमा बर्मामा कार्यरत थिए । यतिखेर लहरो तान्दा पहरो गर्जे जस्तो भएको छ । बर्माको ईतिहास खोज्दै जाँदा बर्मा गए कर्मसँगैको अर्थ खुल्न थालेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मेली गोर्खाली सैनिकहरूको कथा भेटियो । बर्मेली गोर्खालीहरूको ईतिहास तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालमै गराएको पुर्नवाससम्म आइपुगेकोछु । यता एनआरएन अध्यक्ष सागर घिमिरेलाई भेटेपछि हालका बर्मेली नेपालीहरूसँग पनि बाक्लै संगत हुन थालेको छ । कवि अविनाश श्रेष्ठलाई आफना पुर्खाहरूको थलो बर्मा आउने मन छ रे । भेटमा भन्नु भएको थियो ।
बर्मा चैत्य र स्तुपाहरूको सहर हो । यङ्गन त झन् सुनौला चैत्यहरूको सहर हो । बर्माको अर्को प्रसिद्ध पर्यटकिय स्थल 'बगान' कम्बोडियाको हिन्दु मन्दिरहरूको ऐतिहासिक क्षेत्र ‘आंकोरभाट'पछिको ठूलो मानिन्छ । काठमाडौ उपत्यका भन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको यो धार्मिक स्थल ९ देखि १३ औँ सताब्दीको बीचमा बनेको मानिन्छ । तत्कालीन सासन ब्यवस्थाले दश हजार बौद्ध स्तुपा, मन्दिर र गुम्बाहरू बनाएको अनुमान गरिन्छ । हाल २२ सय बौद्ध स्तुपा, मन्दिर र गुम्बाहरू छन् यहाँ । ती स्थलहरू निर्माणका लागि कति नागरिकहरूका कति पुस्ताले आफ्नो जीवन अर्पण गर्नु पर्‍यो । त्यसको लेखाजोखा छैन । आम नागरिकको श्रम र राज्यको ढुकुटी ती धार्मिक स्थलमै खर्च भएको देखिन्छ । यस आदिम धार्मीक स्थलको कुनै अग्लो स्तुपामाथि चढेर हेरे पनि चारैतिर चैत्य, स्तुपा, मन्दिर र गुम्बाहरूमात्रै देखिन्छन् ।
सरकारी निरिक्षण र संरक्षणमा रहेको यो क्षेत्रमा बौद्ध चैत्यहरूबाट सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्न पर्यटकहरूको भिड लाग्छ । दिनभरीका लागि विद्युतीय साइकल भाडामा पाइन्छ । हप्तौँ घुम्दा सायद सबै स्तुपा, मन्दिर र गुम्बाहरू पुग्न सकिन्छ होला । यहाँ पनि सबै चैत्यहरूमा यङ्गुनमा झैँ घुँडा देखिने गरिको छोटो लुगा लगाए प्रवेश निषेध छ । प्रवेशद्धारमा लुंगी बिक्रीमा छ । पुर्खाले यस्तो ऐतिहासिक स्थान सन्ततीहरूलाई छोडेर गए । जसरी धार्मीक स्थलहरू बने उसरी नै आज पूर्वमा शिक्षा र चेतनाका निम्ति राज्यले लगानी गर्छ कि गर्दैन ? ईतिहासदेखि ती बास्तुकलासँगै शिक्षामा लगानी भएको भए आज बर्मा कहाँ पुग्थ्यो होला, नेपाल वा भारत वर्ष कहाँ पुग्थ्यो होला भन्ने अनुमान गर्न मन लाग्छ । यतिखेर हामी धर्मको नाममा युद्ध गर्दैछौँ । शिक्षालयहरू ध्वस्त हुँदैछन् । तर बर्मा सन् २०११ पछि साँच्चै शान्त र सालिन छ । थाहा छैन यो सालिनता भित्र जनताका कति दुःख लुकेका छन् ।
००० बर्माको अर्को पर्यटकीय सहर ‘पा आन' पुग्ने अवसर मिल्यो । यसलाई गुफाहरूको सहर भने हुन्छ । दर्जनौँ गुफाहरूमा बौद्ध मुर्तिहरू र ध्यान केन्द्र बनेका छन् । यहाँ पनि मोटरसाइकल भाडामा लिएर घुम्ने पर्यटकहरूको ठूलो जमात भेट्न सकिन्छ । लुना र म सँगै लुनाका दुई सहकर्मीहरू एस्ट्र्र्डि र मरि पनि थिए यात्रामा । हामी २ वटा बाइक भाडामा लिएर दिनभरी यात्रामा हुन्थ्यौँ । सुनसान सडकमा यात्रा गर्दै एउटा पछि अर्को गर्दै गुफा र चैत्यहरू घुम्यौँ हामी । ‘पा आन'मा पनि धेरै तालहरू छन् । तालहरूबाट निस्किएका कनालहरू धानबारी हुँदै कुद्छन् । तिनै साँघुरा कनालहरूमा नाउ खियाउँन रमाइलो हुन्छ । ‘पा आन' शहरको पुर्वदक्षिण भेगमा एक हजार आठ वटा बुद्धका मुर्तिहरूको धार्मीक स्थललाई ‘लुम्बिनी बगैँचा' नाम दिइएको छ । यो बगैँचा बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी नेपालमा समर्पित छ भनेर लेखिएको छ । यो देखेर निक्कै खुशी लाग्यो । यो राष्ट्रियता भन्ने चिज ठाउँ कुठाउँ जागेर आउने रहेछ । एसिया साइकल यात्रामा निस्किएका नेपालका ३ युवाहरू केही हप्ता अघि यङ्गुनमा भेट भएको थियो । भारत, बंगलादेश, श्रीलंका हुँदै बर्मा आइपुगेका उनीहरूको चिन्ता थियो ‘श्रीलंकाका बौद्धमार्गीहरू पनि बुद्ध भारतमै जन्मिएका हुन् भन्ने ठान्छन् ।'
घुमघाम सकेर फर्किने ठाउँ त यङ्गुन नै हो । लुना र मेरो बसाई केही महिनालाई यता सरेको छ । हामी स्वेडागन चैत्यको नजिकै बस्छौँ । नेपाली राजदुतावास यहाँबाट हिंडेर १५ मिनेटमा पुगिन्छ । स्वेडागन चैत्यको पुर्वमा लमतन्न सुतेको छ कण्डोवकी पार्क । करिव आठ किलोमिटर गोलाईमा फैलिएको यो पार्कभित्र कृतिम तालहरू छन् । होटल, रेष्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल र फूलबारीहरू छन् । प्रत्येक दिन यसलाई एक परिक्रमा लाएपछि म पार्कभित्र छिर्छु । यो पार्क मानिसहरूले स्वास फेर्न आउने ठाउँ भएको छ । ब्यायामका लागि होस् या डेटिङका लागि यो पार्क प्रसिद्ध छ । तालको किनारमा निजी कारहरू दर्जनौँ छन् । कार नहुनेहरू रुख मुनी छन् वा तालमाथि बनेका काठका पुलमाथि अंगालोमा छन् । कार हुनेहरू कारभित्रै छन् । तर पिके फिल्ममा जस्तो यहाँका कारहरू उस्तरी हल्लिरहेका छ्रैनन् । यहाँ प्रेम सालिन छ ।
यहाँको सहर ब्यवस्थापन देख्दा लोभ लाग्छ । कण्डोवकी पार्क जस्ता दर्जनौँ पार्क छन् यंगुनभरी । बाटोहरू चौडा छन् । बाटोको बीचमा फूलबारी र रुखहरू छन् । दक्षिण पूर्वी एसियाको यो देश निकै सुन्दर लाग्छ । अचम्म लाग्छ, हरेक दिन किन कर्मचारीहरू चौर, रुख र फूलहरूमा पानी हाल्छन् । किन हरेक दिन बाटो सफा गर्छन् । ट्याक्सी ड्रइभरहरू किन पान थुक्ने बट्टा बोकेर हिंड्छन् ? बाटोमै किन थुक्दैनन् ।
बर्माको पहिचान भनेको यहाँको लुंगी र पान हो । जर्दा पान सबैको मुखमा हुन्छ । महिला पुरुष, युवा बृद्ध सबै । यहाँको पानले लिंग र उमेरमा कुनै भेद गर्दैन । यहाँको पान हाम्रोतिर पाइने पान जस्तो ठूलो मुठो हुँदैन । थोरै पातमा तामुल, चुना र जर्दा हालेको चिटिक्कको आकारको हुन्छ । भारतको आसामतिर खाने तामुलपानसँग केही मिल्छ जस्तो लाग्छ । मैले पनि केही पटक खाइ हेरेँ । झुम्म बनाउने रहेछ । अचेल जर्दा नहालेको पान नियमित खान मन पर्छ । पान नखाए यहाँ भए जस्तो महसुस नहुने रहेछ । यस्तो लाग्यो प्रायः मानिसहरू पानको नसामा छन् । यहाँ पाइने पातले बेरेको लामो चुरोट र सिगार पनि स्वादिलो र नसालु हुन्छ । यहाँ सबै मानिसहरू सालिन र शान्त लाग्छन् । ट्याक्सीमा धेरै मोलतोल हुँदैन । भनेको ठाउँमा अलिकति तलमाथि भए पनि खुशीले पुर्‍याई दिएका छन् । पछाडि डालो भएको गाडीमा यात्रुहरू थ्याच्चै भुइँमा बस्छन् । स्कुटरको अग्रभागको खाली ठाउँमा केटाकेटीहरू थ्याच्चै बस्छन् । हामीकहाँ जस्तो यहाँ अहम पलाई सकेको छैन ।
पर्यटकहरूलाई ठग्ने बानी परेका छैनन् यहाँका मानिसहरू । कण्डोवकी पार्कको एउटा पसलमा कफी पिउँदै थिएँ । एक अपरिचित ग्राहकले मेरो कफीको पैसा तिरेर गए । धेरै ठाउँमा पान किन्न खोज्दा मसँग पैसा लिन मान्दैनन् । मैले पान खाएको देखेर अचम्म मान्छन् यहाँका पसलेहरू । सेवाभाव धेरै महसुस हुन्छ यहाँ । सहरबाहिर त हुने नै भयो मुख्य सहरमा पनि माटाका भाँडाहरूमा यात्रुहरूका लागि पिउने पानी राखिएको छ । भिक्षुहरू बुद्ध गान गाउँदै हातमा भिक्षा थाली बोकेर सडकभरी हुन्छन् । बालबालिका देखि अनेकौँ उमेरका छन् । यहाँ सेवा गर्नलाई कुनै विशेष अवसर कुर्नु पर्दैन । सेवा गर्ने मन हुनेहरूले हरेक दिनका फिरन्ता भिक्षुहरूको थालीमा केही राखिदिन सक्छन् । ती लाखौँ भिक्षुहरूको जिविकोपार्जन यसरी नै हुन्छ । राज्यले गुम्बाहरूमा ठूलो लगानी गरेको छ ।
हरेक ठाउँका आआफ्ना विशेषता छन् । यङ्गुन सहर सडकमा राखिएका खानाहरूले प्रसिद्ध छ । जता हेर्नुस् सडकभरी खानाका पसलहरू छन् । यस्तो लाग्छ, कति कुरा खान जानेका यहाँका मानिसले । परिपरिका सागसब्जी र कन्दमुलहरू छन् । जरादेखि हाँगा र पातसम्म केही बाँकी छैन खानलाई । मासुका किसिम पनि अनेक छन् । माछादेखि गाईगोरुसम्म । कुखुरा र माछा त नाङ्लोमा सागसब्जी जस्तै गरेर राखिएको हुन्छ बेच्न । जनावरका आन्द्रा भुँडी खाने पसलहरू जताततै भेटिन्छन् । ‘नाइन्टिन स्ट्रिट' सिंगो माछा र वियरको लागि प्रसिद्ध छ । रेस्टुरेन्ट अगाडि लमतन्न सडक भरी राखिएका टेवल कुर्सीमा मस्त राम भएर पिउने पर्यटकहरू बढेका छन् । अचेल पर्यटकहरूको बृद्धिसँगै डाउनटाउनमा डिस्को र बारहरूको संख्या पनि थपिँदैछन् । अझै डेटिङ र डिस्को पनि लुंगी मै आउने युवाहरू छन् यहाँ ।
युवतीहरू दुवैतिरका गालामा तनखा नामको काठको लेप लाउँछन् । भड्किलो पहिरनले नछोइसकेको आफ्नै जातीय परिवेशमा रमाइरहेको युवा जमातमा खुल्ला बजारले पक्कै असर पार्ने छ । त्यसको असर केही वर्षमा देखिएला । सन् १९५४ मा ब्रिटिसको पालामा बनेको सहरको छेऊबाट सहरलाई बृत्त बनाएर कुद्ने रेल छ यहाँ । यसलाई सर्कल ट्रेन भन्ने गरिन्छ । निक्कै विस्तारो चल्ने यो «ट्रेनले एक परिक्रममा गर्न ठ्याक्कै ३ घण्टा लाग्छ । सर्कल ट्रेनको यात्राले यहाँका आम मानिसहरूको साक्षात्कार गराउने छ । शहरपछाडिका झुप्रा र गरिव बस्ती पनि देखिन थाल्छ ।
हरेक ठूला सहरभित्रका रहस्यहरू त्यहाँ बस्दै गएपछि खुल्न थाल्छन् । लामो समय ब्रिटिस शासन र उसैगरी लामोसमय सैनिक शासन भोगेको यो देशका आम जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक स्थिति निक्कै दयनिय छ । प्रसस्त प्राकृतिक स्रोतको धनी बर्मालाई पछिल्लो समय द्रुत गतिमा विकास भैरहेको देश मानिन्छ । अचेल पर्यटकहरूको ओइरो लाग्छ यहाँ । सन् २०११को राजनीतिक परिवर्तनसँगै विस्तारै यहाँ नव लगानी कर्ता तथा पर्यटकहरूलाई सहज वातावरण बन्दै गएको मानिन्छ । आङ साङ सुकीको पार्टी सरकारमा छ ।
सन् २०१२ को राष्ट्रिय चुनाव र सन् २०१५ को स्थानीय चुनाव दुवैमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले भारी मत ल्याएर विजय भयो । म्यानमार आफ्नो पुरानै नाममा फर्किएर बर्मा भएको छ । रङ्गुन पनि फेरि यङ्गुन भएको छ । कामना गरौँ यहाँका मानिसहरूको दुःखबाट मुक्ति मिल्नेछ । स्रोतः दि लेडी, बर्मा भिजे, सुकीको जीवनी दि भोइस अफ होप, जर्ज अरबेलको उपन्यास बर्मिज डेज तथा विभिन्न एजेन्सीहरूबाट
दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज अन्‍योलमा 5819
मन्त्रीको डेरामै करोड खर्च 3391
यसरी छानौं तिहारमा शुद्ध खानेकुरा 2273
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशको राजधानी 3729
भाइटीकाको उत्तम साइत ११:५१ बजे 9
सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको ज्‍यान गयो 487
भाईटीकामा पनि बाग्मती सफाइ 693
जुवाडे समाउन छ राउण्ड गोली प्रहार 539
जुवाडे समाउन छ राउण्ड गोली प्रहार 3671
कम्युनिस्टबाट प्रजातन्त्र खतरामा : प्रधानमन्त्री देउवा 5928